Jaangooyooyinka & Boorashka makeup makeup Palette 9 midab oo midabyo ah si ay ugu habboonaato midabada maqaarka ee kala duwan oo aan sun lahayn iyo muuqaalka Paraben Bilaashka ah iyo Arxan darada Bilaashka ah ee Dabiiciga ah.
Midka koowaad:Jadwalkayaga Isku-darka & bronzer-ka ayaa si aan caadi ahayn u fududahay in la isticmaalo, taasoo ka dhigaysa jadwalkaaga qurxinta naqshad. Hooska ayaa la qasi karaa oo la waafajin karaa si loo abuuro hooska aad rabto. Si fudud ugu wareeji buraashka qurxintaada mid ka mid ah hooskeenna xiisaha leh oo ku dabool qaybaha aad rabto ee wejigaaga. Taasi waa taas.
Waara: dusha isku qurxinta dusha iyo budada astaanta xirfadeed, siman oo sahlan in la isku daro. Saxanka labiska Powdery wuxuu yareyn karaa muuqaalka wajiga dufanka leh iyo lafaha dhabanka cajiibka ah ee wajiga leh. Qurxintaada ka dhig mid kaamil ah waqti dheer
Kalluumeysiga ayaa ah mid fudud oo sahlan in la isku daro, Vodisa Contour eye disc disc. Qurxinta dusha sare waa mid aad u fudud in lagu daro faro ama burush, midab dabiici ah oo dabiici ah, oo ku habboon qurxinta maalinlaha ama munaasabadaha gaarka ah. Ku habboon da 'kasta iyo noocyada maqaarka.
Labada hore:Waad la yaabi doontaa qaabkeeda jilicsan ee fudud. Waxaa loo sameeyay waxyaabo dabiici ah si ay si aan kala go 'lahayn ugu dhalaasho maqaarkaaga. dusha & bronzer waxay ku dareysaa dhammeystirka taabashada iyada oo aan la dareemin culeys culus waana lagu dhejin karaa natiijooyin run ahaantii u gaar ah.
Saddexda hore:Beautydom's Glowing make up Palette waxaa ku jira 9 midabo oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo u dhexeeya iftiinka ilaa mugdiga si ay ugu habboonaato midabbada maqaarka ee kala duwan. Muraayadahaas waxaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo aagagga sare ee wejiga si aad u qeexan oo u eg sayax.
Waxaan run ku haynaa qiimaheena asaasiga ah: daahirnimo, noocyo kala duwan, fudeyd, iyo tayo. Alaabtayada waxaa lagu sameeyaa maaddooyinka ugu amniga badan, taasoo ka dhigeysa isku-qurxinteena mid aan sun ahayn oo aan lahayn paraben. Waxaan sidoo kale gebi ahaanba nahay xayawaan aan naxariis lahayn.
Afarta hore:Maarta naxaasta ah, Maaddooyinka la isku qurxiyo ee maarta ah, dhalaalaya, ma dhalaalayo. Budadan budada ah, budada naxaasta ah, iyo nooc kasta oo midab leh.
Dhunkasho shumis, dhalaal naxaas dhalaalaya ayaa ka fudud sidii hore! Kani waa tankeenna ugu wanaagsan Bronzer toner oo leh midab diiran, qoraxdu ka muuqato. Qeex sifooyinkaaga wejiga oo u adeegso qurxinta naxaasta ah sida shaashadda dusha sare ee meelaha bannaan ee wejigaaga.
Adoo adeegsanaya agabkeenna kala duwan ee is-qurxinta si aad u dhammayso qurxintaada, laga bilaabo casaanka, naxaasta, aasaaska iyo qarinta illaa palette iyo lipstick, waxaad dareemi doontaa fiicnaan.
Hadiyadda ugu fiican, Qalabka Qurxinta ayaa kaa caawinaysa inaad wejigaaga u ekaato mid muuqaal leh, adigoon ka dhigin qurxintaada mid aad u buunbuunin ama dhumuc leh. Waxay kufiican tahay qurxinta maalinlaha ah.
Hore: Waji qurxiyo-BD-Blush
Xiga: Dibno qurxiyo-BD-LS-009
Burushka ugu wanaagsan
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Lipstick yar, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Burushka ugu Fiican, Liimiga Shimmer, Matte Eyeshadow Palette, Dhammaan Alaabooyinka